Muuse Biixi: "Waa Gardarro iyo meel ka dhaca ugu weyn in Xamar laga xuso 26-ka June.." - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Muuse Biixi: “Waa Gardarro iyo meel ka dhaca ugu weyn in Xamar laga xuso 26-ka June..”
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gef iyo meel ka dhac weyn ku tilmaamay in Magaalada Muqdisho laga xuso 26-ka June oo ku beegan sanadguuradii 61-aad markii Gobollada Waqooyi ay qaateen xoriyadda.
Muuse Biixi ayaa xaflad ka dhacday magaalada Hargeysa ku eedeeyay dowladda Xamar ka jirta inay cunaqabateym iyo dagaal diblomaasiyadeed iyo mid toos ah la gashay Somaliland, haddana ay dhinaca kale sheeganeyso in Somaliland tahay qeyb ka mida Soomaaliya.
“Caawa Xamar waxay leedahay: waxaan u dabaaldegeynaa xoriyadii Waqooyiga, anigu garan maayo meel ka dhac ka weyn iyo gardaro intaas ka badan in caawa xamar ay tiraahdo anagaa xukunna oo Gobolladii Waqooyi.. Xaggana gudaha Somaliland waxaan ku heynayaa dagaal xabbad ah, mid cunaqabateyn ah iyo mid diblomaasi ah.. waxaanse la yaabahanay qolada somaliland ee taas kala qeyb galeysa ee ugu sacabineysa” ayuu yiri Muuse Biixi.
Muuse Biixi ayaa faahfaahin ka bixiyey xoriyadii Gobollada Waqooyi iyo sidii ay ku timid Midnimadii ay dib uga laabteen, isagoo caddeeyay inay Somaliland gaartay heer dunida u istaagto ayma mareyso meeshii ugu fiicneyd.
Previous articleAskarigii Mareykanka ee sida Cunsuriyadda ah u dilay George Floyd oo lagu xukumay 22 sano
Next articleQodob aan la fileyn oo hareeyay Khudbadii Maxamed Farmaajo ee Munaasabadda 26-ka June